« Mamotika ny tanora » -
AccueilTresaka« Mamotika ny tanora »
15/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Nialan’ny olona tsikelikely ny hetsik’ireo depiote 73 etsy amin’ny 13 mey. Na ireo mpiara-dia akaiky amin’izy ireo aza efa tsy marisika amin’ny fanohanana ity hetsika ity intsony. Mazava ny antony: efa samy nanameloka ny fanonganam-panjakana nokasain’izy ireo ny lehiben’antoko tahaka an’i Marc Ravalomanana. Vokany, nitsefotra ilay fikasana hanongam-panjakana an-dalambe. Novoizin’izy ireo indray amin’izao fa hoe mandeha ny fikasana fisamborana azy ireo. Lohatenina gazety mpanohana azy ireo izany omaly. Nivoitra nandritry ny kabary nifandimbiasan’izy ireo tamin’ny sabotsy ihany koa.
Kendan’ny vomanga nasesiky ny tanany tokoa ve izany ireto depiote 73 nanao fanonganam-panjakana nitsefotra ireto? Fantany tsara tokoa mantsy ny miandry izany mpanongam-panjakana izany.
Rehefa mahatsiaro matahotra ny ratsy hatao, dia tokony mahay mifona sy mampiseho fiovana eo anatrehan’ny vahoaka fa tsy sanatria hampihatra ilay ohabolan’ny gasy hoe “raha maty aho matesa rahavana”. Potehiny miaraka aminy koa mantsy izao ny fianaran’ny ankizy mpianatra. Nirehareha mihitsy ry zareo fa tonga nanatevin-daharana ny hetsika hono ny mpianatry ny LMA etsy Ampefiloha omaly. Ny mpianatra hafa izay efa nalaina an-keriny tamin’iny herinandro lasa iny manginy fotsiny. Mbola nohamafisiny aza fa hatao izay hampikatsoana tanteraka ny fampianarana amin’ny ankapobeny amin’ity herinandro ity. Tsy fihetsika raiamandreny mpitarika intsony izany mampikatso ny fianaran’ny ankizy ho avin’ny firenena izany. Sa izay tokoa ilay hoe fiovana. Fiovana ho amin’ny ratsy kokoa. Ny olana politika efa hivaha atsy ho atsy, ary efa mandray an-tanana ny famahana izany avokoa ny mpanelanelana vahiny sy ny eto an-toerana, kanefa nahoana no ampikatsoana ny fianaran’ny ankizy mpianatra.
Ianareo depiote 73 ihany izany no manolo-bato mafana ny ankizy mpianatra, ka mampirisika azy ireo hitokona na dia tsy misy zava-pantatr’izy ireo aza ny amin’izany hetsika politika izany. Ireny ankizy mpianatra ireny rahateo mbola tsy misy mpifidy ka afaka antsoina hifidy azy ireo indray any aoriana any. Tsy misy afa-tsy fanapotehana ny ankizy mpianatra tsotra izao fotsiny izao hetsika izao. Ny olan’ny mpanao politika tsy maintsy hilamina fa ny fianaran’ny ankizy mpianatra potika teo amin’ny 13 mey mba ahoana ?